नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको दोश्रो बन्न सफल - अभियान खबर
नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको दोश्रो बन्न सफल
नेपाली मुलुका युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको दोश्रो बन्न सफल भएका छन् । पोखरेललाई पछि पार्दै अमेरिकन आइडलको उपाधि जस्ट सामले जितेकी छन् ।
नेपाली समय अनुसार सोमबार बिहान भएको फिनालेमा दिवेश अन्तिम दुईमा पुगेका हुन् । उनले उपाधि भने जित्न सकेनन् । लगातार राम्रो प्रदर्शन गरेर दर्शक तथा निर्णायकको मन जित्न सफल भएका दिवेश फस्ट रनरअप अर्थात दोस्रो भए । जस्ट सामले उपाधि जितिन् । अमेरिकन आइडलमा फस्ट रनरअप हुने दिवेश पहिलो नेपाली मुलका गायक हुन् ।
हजारौं प्रतिस्पर्धी लाई पछि पार्दै दिवेश फाइनलमा पुगेका थिए । अमेरिकन आइडलको फाइनलमा पुग्ने उनी पहिलो नेपाली हुन् । उत्कृष्ठ ७ बाट भोटिङका आधारमा दिवेश फाइनलमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था छ ।
कोरोनाको महामारीका कारण अमेरिकन आइडलले भर्चुअल प्रस्तुति गर्दै आएको छ । दिवेशले केही समय अगाडि नेपाली भाषामा बोल्दै भोट अपिल गरेका थिए । उनी काठमाडौं रविभवनका हुन् ।
सरकारले एकपछि अर्को सफलता चुमिरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली
Posted on January 31, 2019 Author abhiyaan
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले मुलुकमा नयाँ–नयाँ कामको थालनी गरिरहेको र त्यसले एकपछि अर्को सफलता चूमिरहेको दावी पनि गरे । बिहीबार नेपाल टेलिभिजनको ३४ औं वार्षिकोत्सव तथा एचडी प्रशारणको शुभारम्भ गर्दै उनले जनताको विकासको चाहनालाई तीव्रता दिन सरकारले नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासमा जोड […]
ह्याकपछि चलेनन् बैङ्कहरुका अधिकांश एटीएम, राष्ट्रबैङ्कले डाक्यो आकस्मिक बैठक
Posted on September 1, 2019 Author abhiyaan
नक्कली भिसा कार्डबाट रकम निकालेको भेटिएपछि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कर्सहरुलाई आकस्मिक बैठकमा बोलाएको छ । राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीका अनुसार बैठक अबको दुई घण्टापछि बस्दै छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार नक्कली एटीएम कार्डबाट पैसा निकालेको थाहा पाएपछि सो बारे बुझ्न बैठक डाकेको हो । यता, बैङ्कको एटीएमबाट अनाधिकृतरुपमा रकम झिकिएको खबर बाहिररिएपछि अधिकांश बैङ्कहरुको […]
के. सिका सर्मथक माँथि प्रहरिले चलायो गोलि ३० भन्दा बडि द्याइते के सि काठमाडौं
Posted on July 19, 2018 July 19, 2018 Author abhiyaan
३ साउन, काठमाडौं । जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौंतर्फ ल्याइँदैछ । स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गर्दा भएको झडपमा थुप्रै विद्यार्थी घाइते भएपछि डा. केसी काठमाडौं आउन तयार भएका हुन् । जुम्लामा डा.के .सि को सम्मबथर्नमा हजारौ बिद्यर्थी सर्बसाधरण तथा जूम्लाबाँसिहरुले बिरोध प्रर्दशन गरेका छन् । बिरोधका बाँबजुत प्रहरिले थरपकड ग¥यो त्यहि क्रममा केहि पहरिले […]
लकडाउनलाई कायमै राख्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय
सिसडोलमा फोहोर फाल्न नरोकिने, स्थानीयको स्वाब परीक्षण महानगरले गर्ने